इलामे जेठोका दुई मुक्तक कृति सार्वजनिक
काठमाडौं : मोफसलका स्रष्टा शिव अधिकारी (इलामे जेठो)का दुई मुक्तक कृति सार्वजनिक भएका छन्। ‘झटारो’ र ‘भद्रगोल’ शीर्षकका दुई कृति शनिबार प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले सार्वजनिक गरे।
भद्रगोलमा चार सय ७७ र झटारोमा तीन सय २५ मुक्तक समेटिएका छन्। इलाममा बसेर लामो समयदेखि साहित्य साधना गरिरहेका अधिकारीका दुई कृतिको विमोचन त्रिपुरा साहित्य समाज ललितपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकसाथ भएको हो।
‘झटारो’ माथि समालोचक डा. कुलराज निरौला र ‘भद्रगोल’ माथि समीक्षात्मक मन्तव्य समालोचक रमेश शुभेच्छुले व्यक्त गरे। कार्यक्रममा मुक्तककार अधिकारीको मुक्तककारिता र व्यक्तित्वबारे दिव्य गिरी, डा. केदार न्यौपाने, मधेस प्रसाईं र नेत्र न्यौपानेले बोलेका थिए। अधिकारीका दुई गजल संग्रह र एउटा मुक्तक कृति यसअघि नै प्रकाशित भइसकेका छन्।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुवेदीले अधिकारीको सेवा निवृत्त जीवनको सिर्जनशील सामथ्र्यको प्रशंसा गर्दे थप सिर्जनशीलताको कामना गरे। उनले मुक्तक समसामयिक विषयवस्तु केन्द्रित रहेको बताए।
झटारोमाथि बोल्दै समालोचक डा निरौलाले अधिकारी समसामयिक प्रतिनिधि मुक्तककार भएको टिप्पणी गरे। अर्को कृति भद्रगोलमाथि बोल्दै शुभेच्छुले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विसंगतिमाथि व्यड्ग्य गरिएको बताए। उनले मुक्तक उर्दु फारसीको रुवाईबाट प्रभावित विधा नभई संस्कृत साहित्य चिन्तनको लघु र लघुतम कविताको नेपाली प्रयोग विशेष भएको उल्लेख गरे।
१३ कविको संयुक्त महाकाव्य ‘आरोहण’ सार्वजनिक
अन्नपूर्ण सोमवार, मंसिर ४, २०७४ 910 पटक पढिएको
मंगलवार, श्रावण २९, २०७५
बुई चढेर नदी वारपार, शुल्क १ हजारः पत्रपत्रिका
ओली–प्रचण्डको नेकपालाई दल दर्ता खारेज गर्न अर्को नेकपाको माग
विप्लव नेकपाका दुई जना कार्यकर्ता पक्राउ
सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
सम्बृद्ध मुलुक निर्माणका लागी आध्यात्मिक शिक्षाको अभ्यास जरु
बाढीले विद्यालय भवन बगायो
पुल भत्किदाँ २६ जनाको मृत्यु, १५ जना गम्भीर घाइते
बाढीले गर्दा डेढ करोडभन्दा बढीको क्षति